PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-08 - Uzamela ulutsha amathuba...
Uzamela ulutsha amathuba...
Isolezwe lesiXhosa - 2018-11-08 - IINDABA - NANGAMSO SILO
UKHOLELWA ukuba inkampani yakhe iza kuphuhlisa izakhono zolutsha lwaseMpuma Koloni oyinzalelwane yaseMdantsane uMalibongwe Ngwane (29).
Lo kaNgwane yingqwayingqwayi yenkampani enguSebenza Wena Media & Entertainment eyasekwa ngonyaka ka2017 ngenjongo zokuphuhlisa izakhono zolutsha (18-25 ubudala) lwaseMpuma Koloni ingakumbi eDutywa.
Kudliwanondlebe ebendinalo kunye naye uphefumle wathi: “Le nkampani iza kukhuthaza ulutsha lwaseMpuma Koloni ngezakhono zabo ezifana nomxhentso wesiXhosa nowesilungu, imibongo, oonobuhle, umdlalo weqonga kunye nokucula, ingakumbi ulutsha oluhlala ezilalini nakwiilokishi nanjengoko ulutsha lwanamhlanje lungenalwazi lukhulu ngenkcubeko yalo.”
Lo kaNgwane ukwathi le nkampani iza kuncedisana nolutsha ekuphuhliseni nasekufezekiseni izakhono zabo ngokuthi badityaniswe nabantu abaziinkcubabuchopho kwiinkomfa zenkcubeko nalapho bazokuthi bafundiswe, bakhuthazwe kwizakhono zabo, bakholelwe emaphupheni abo.
Eli tyendyana lomfana liqale ngokuphuhlisa izakhono zolutsha lwaseDutywa, apho bekusenziwa khona ukhuphiswano loonobuhle.
Uphefumle wathi: “Iinjongo zala mnyhadala yayikunika ithuba ulutsha lwaseDutywa ukuveza izakhono zabo nokubanceda bazuze ukuzithemba.”
UMalibongwe ungumzekelo omhle kulutsha lwaseMzantsi Afrika ngoba xa amathuba omsebenzi enqongophele kumele umntu avuke azenzele ukuze azame ukuphila.
“Unyaka ka2019 uza kuza notshintsho kwiindawo ezininzi eMpuma Koloni, ngoba ndizimisele ukusebenza nezikolo ukwenza le minyhadala yoonobuhle, nonobuhle kaSebenza Wena 2019, ukhuphiswano lomdaniso kwizikolo ezithile endizikhethileyo,” utshilo uNgwane.
Uphinde waphefumla umfo kaNgwane wathi: “Umfundi ofuna ukuthatha inxaxheba kwezi nkqubo zizokubanjelwa kwizikolo ezahlukeneyo kunyaka ka2019 angaxhalabi wonke ubani uvumelekile ukuba angenele, kwaye kungenelwa simahla, kuzodityanwa ezikolweni ukuze bangasokoli abafundi.”
UMzantsi Afrika udinga ulutsha oluzimiseleyo, ulutsha oluzokwazi ukuzenzela isonka ngemfundo yalo ngaphandle kokuba baqeshwe kodwa baziqeshe.
Inkampani iSebenza Wena Media & Entertainment ifundisa okanye ibonisa ulutsha ukuba konke kuyenzeka, kudinga nje umntu akholelwe kwisiqu sakhe.